PSG တို့ ခနျြပီယံလိဂျမှာ ကောငျးရှုံးကွီးဖွဈခဲ့တာ ဟုတျမဟုတျ(PSG ဆောငျးပါး အဆကျ-၂) – Sports A2Z
Article • Ligue1 • UCL&UEL
ပီအကျဈဂြီအသငျးကို သုံးသပျတဲ့ ဆောငျးပါးရေးလိုကျတော့ A2Z Page ကို ကှနျပလိနျ့တှေ အမြားကွီး ရောကျလာပါတယျ။ ရှုံးမှ ဘလိမျးတယျ၊ စဆရကလုပျတယျပေါ့။ ဒါပမေယျ့ တဈခုပဲပွောရရငျ ပီအကျဈဂြီအသငျးဟာ ကာလို အနျဆယျလော့တီနဲ့ လိုရှနျ ဘလှနျ့ဈ(လော့ရငျ့ ဘလနျ့ဈ)တို့နောကျပိုငျးမှာ အသငျးကွီးတဈသငျးဖွဈခဲ့သလားဆိုတာ ကွညျ့ကွရအောငျပါ။
အနျဆယျလော့တီလကျထကျက အသငျးကွီးတှနေဲ့ တှဆေုံ့မှုတှမှော တိုကျစဈကို အရမျးဦးစားမပေးတဲ့ နညျးပွဖွဈလို့ ဂိုးပွတျနိုငျပှဲမြိုး နညျးခဲ့ပမေယျ့ ပီအကျဈဂြီအသငျးဟာ အဆငျ့မွငျ့တဲ့ ကစားဟနျကို ပိုငျဆိုငျနိုငျခဲ့ပါတယျ။ အနျဆယျလော့တီ ထှကျသှားခဲ့တော့ သူ့နရောမှာ ဘလှနျ့ဈ ရောကျလာခဲ့ပွီး အသငျးပိုငျရှငျတှေ ပိုကွိုကျတဲ့ တိုကျစဈကစားဟနျနဲ့ ကစားသမားကောငျးတှကေို စုဆောငျးခဲ့သလို တိုကျစဈကလညျး ပိုပွီး ကောငျးမှနျလာခဲ့တယျ။
၂၀၁၂ နှမှော ရောကျလာခဲ့တဲ့ အီဘရာဟီမိုဗဈချြ၊ သီယာဂို ဆေးလျဗား၊ မော့တာ၊ လာဗကျဇီ၊ ဗာရကျတီ၊ လူးကပျဈ မျောရာ၊ ဗနျဒါဗီယယျလျတို့ဟာ အသငျးရဲ့ ကစားပုံနဲ့ အဆငျ့အတနျးကို မွှငျ့တငျပေးခဲ့သလို လူခံတှဖွေဈကွတဲ့ ပတျစတိုရီ၊ မာတှီဒီ၊ မကျဈဝဲလျ၊ ဂါမေးရိုး၊ ဆီရီဂူတို့လို ကစားသမားတှနေဲ့ ပေါငျးပွီး နညျးစနဈပိုငျး ကွှယျဝတဲ့ အသငျးကောငျးတဈသငျးဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။ ခနျြပီယံလိဂျရလဒျကတော့ ဘာစီလိုနာကို ၁၆ သငျးအဆငျ့မှာ အဝေးဂိုးနဲ့ ရှုံးပွီး ပွုတျတာပါ။
နောကျတဈရာသီဖွဈတဲ့ ၂၀၁၃-၁၄ မှာ ကာဗာနီကို ဆကျချေါတယျ။ ကှငျးလယျမှာ ကာဘိုငျး၊ နောကျတနျးမှာ မားကငျညော့ဈနဲ့ ဒီညီ ရောကျလာတယျ။ ပွနျရှငျးထုတျခဲ့တဲ့ ကစားသမားတှကေ လူဟောငျး ပွငျသဈသားတှနေဲ့ ဂါမေးရိုးတို့လောကျပဲ။ ကှငျးလယျမှာ လူငယျ ရာဗြို ကစားခှငျ့ တျောတျောရလာတဲ့ ဒီရာသီမှာတော့ ခြဲလျဆီးကို အိမျကှငျးမှာ တဈဂိုးပေးခဲ့ရလို့ အဝေးဂိုးနဲ့ပဲ ခနျြပီယံလိဂျကှာတားက ပွုတျခဲ့ပွနျတယျ။
လိုရှနျ ဘလှနျ့ဈလကျထကျမှာ အသငျးရဲ့ ကစားပုံက ဆှဲဆောငျမှုရှိပွီး တိုးတကျလာတာက ငွငျးမရဘူး။ ၂၀၁၄-၁၅ ရာသီမှာတော့ ပွညျ့စုံမှုရှိနတေဲ့ လူစာရငျးကို ခြဲလျဆီးကနေ ဒေးဗဈ လူးဝဈဇျတဈယောကျပဲ ထပျဖွညျ့တယျ။ အခု စပါးဈမှာ ကစားနတေဲ့ အျောရီယေးကို တူးလူးဈကနေ အငှားနဲ့ စမျးချေါတယျ။ မနှဈက အနာပေးခဲ့တဲ့ ခြဲလျဆီးကို အခြိနျပိုမှာ အဝေးဂိုးနဲ့နိုငျတယျ။ ဒါပမေယျ့ ကှာတားမှာပဲ ဘာစီလိုနာကို မယှဉျနိုငျဘဲ လှညျ့ပွနျခဲ့ရပွနျတယျ။
၂၀၁၅-၁၆ မှာလညျး လူစာရငျးက အဖွညျ့ခညျြးပဲ၊ ကာဘိုငျးနဲ့ လာဗကျဇီတို့လို အခနျးကဏ်ဍနညျးပွီး ခွစှေမျးမကွိုကျသူတှကေို ထုတျတယျ။ အခုထိ သကျတျောရှညျနတေဲ့ ဒီမာရီယာ၊ ဂိုးသမား ထရကျပျ၊ ကှငျးလယျရော ခံစဈပါရတဲ့ စတမျဘူလီ၊ မိုနာကိုမှာ ဟော့နတေဲ့ ကာဇာဝါတို့ကို အားဖွညျ့တယျ။ တဈနရောမှာ ဒေါငျဒေါငျမွညျနှဈယောကျနဲ့ စိတျကွိုကျ အတငျအခလြုပျလို့ရတဲ့ အသငျးဖွဈလာတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဘယျလိုပွောရမလဲ၊ ထူးမခွားနား စတိုရီက ကှာတားမှာပဲ မနျစီးတီးကို ရှုံးပွီး ပွုတျပွနျတယျ။
၂၀၁၆-၁၇ မှာတော့ အပွောငျးအလဲတှေ ကွီးခဲ့တယျ။ နညျးပွ အမျမရီရောကျလာပွီး အရှိနျအဝါမွငျ့တဲ့ အီဘရာဟီမိုဗဈချြ ထှကျသှားတယျ၊ ဒေးဗဈ လူးဝဈဇျ ခြဲလျဆီးပွနျပွီး ဗနျဒါဗီယယျလျ၊ ဆီရီဂူ၊ စတမျဘူလီ၊ ဒီညီတို့ ထှကျသှားတယျ။ အသငျးနဲ့ အံမဝငျတဲ့ ချေါယူမှုတှေ စလာတယျ။ ဆီဗီလာကနေ အမျမရီချေါလာတဲ့ ခရာဟိုဗီယကျက အလုပျမဖွဈဘူး၊ ရီးရဲလျဂငျြး ဟီဆေးကို ခံလိုကျရတယျ၊ လိုဆဲလျဆို၊ ဒရကျဆလာ၊ မူနီယေး၊ ဂှနျဆာလို ဂေးဒကျဈတို့ ရောကျလာတယျ။
ခရာဟိုဗီဟကျ၊ ဟီဆေး၊ ဂေးဒကျဈတို့ အံမဝငျပမေယျ့ ကာဗာနီရဲ့ ဂိုးသှငျးအား၊ ဒီမာရီယာရဲ့ ဖနျတီးမှု၊ မာတှီဒီ၊ မော့တာတို့ရဲ့ ကှငျးလယျ၊ ဟနျခကျြညီတဲ့ ကစားပုံနဲ့ အမျမရီတို့ အလုပျဖွဈခဲ့တယျ။ ဒရကျဆလာကလညျး ဒဏျရာမြားပမေယျ့ ခွစှေမျးကောငျးခဲ့ပွီး ခနျြပီယံလိဂျရလဒျကတော့ ၁၆ သငျးအဆငျ့မှာ ဘာစီလိုနာကို လေးဂိုး-ဂိုးမရှိနဲ့ အိမျကှငျးမှာ နိုငျပွီးမှ ဒိုငျကူကူ ဘယျလိုညဈညဈ ခွောကျဂိုး-တဈဂိုးနဲ့ ရှုံးခဲ့တဲ့ Good Ebening ရဲ့ ရလဒျက အားလုံးပွောစရာဖွဈခဲ့တယျ။
၂၀၁၇-၁၈ မှာတော့ ယူရီဆိုတဲ့ ဘတျဈကေးသားက တဈရာသီ လာလညျတယျ။ ဒနျနီယယျလျ အဲလျဈဗကျက အလှတျနဲ့ ဂြူဗီက လာတယျ။ နမောကို ယူရို ၂၂၂ သနျး လြျောကွေးနဲ့ ချေါပွီး အမျဘာပကေို အငှားနဲ့ စချေါတယျ။ ဒီရာသီမှာ ပွောရရငျတော့ အခုလို ပုံမလာ ပီအကျဈဂြီဖွဈလာဖို့ အစပြိုးခဲ့တာပဲ။ ကှငျးလယျလူတှေ တသီကွီး ထှကျသှားတယျ။ မာတှီဒီကို ထိနျးမထားနိုငျဘူး။ ပတျစတိုရီနဲ့ မော့တာတို့ ခွကေလြာတယျ။ ဂေးဒကျဈကို ရှငျးထုတျနိုငျခဲ့ပမေယျ့ လူးကပျဈ မျောရာကို ရောငျးလိုကျတာက နညျးနညျးနာတယျ။ အမျမရီရဲ့ ခရာဟိုဗီယကျ သုံးမရလို့ ဝကျဈဘရှနျးကို ငှားခဲ့ရတယျ။
ဒီရာသီမှာတော့ ရျောနယျလျဒို ကောငျးလှနျးနတေဲ့ ခနျြပီယံ ရီးရဲလျမကျဒရဈကို နှဈကြော့လုံးရှုံးပွီး ပွိုငျပှဲက ထှကျရပွနျတယျ။ နမောလား? အသငျးငယျတှနေဲ့ဆို ခွစှေမျးပွပမေယျ့ ပှဲကွီးတှမှော ဘယျရောကျနမှေနျး မသိဘူး။ ကာဗာနီကိုပဲ အားကိုးနရေပွီး သူခွစှေမျးမပွနိုငျရငျ၊ နာနရေငျ အဆငျမပွတေဲ့ အသငျးကနေ ရာသီကုနျတော့ အမျမရီ အထုတျခံလိုကျရတယျ။
၂၀၁၈-၁၉ မှာ တူဟယျလျရောကျလာတယျ။ အမျဘာပကေို အပွီးသတျဝယျတယျ။ ဘယျနားသုံးရမှနျးမသိတဲ့ ခယျရာ၊ အရှယျလှနျ ဘူဖှနျ၊ ဆရာကွီးတှကေို အရနျခုံ ပို့ပဈတဲ့ ခြိုပိုမိုတငျး၊ လီယနျဒရို ပါရေးဒကျဈတို့ကို ချေါတယျ။ အသငျးအတှကျ တိုကျစဈခံစဈမှာ အားကိုးရတဲ့ ဘားနတျကတော့ ဂှါဒီယိုလာလကျထှကျမို့ အားကိုးလို့ရခဲ့တာပေါ့။ ပါရေးဒကျဈကတော့ Normal Pass ကလှဲရငျ ဖွောငျ့အောငျ ပေးတတျတဲ့သူ မဟုတျခြိနျမှာ မော့တာ အနားယူပွီး ပတျစတိုရီ၊ လိုဆဲလျဆိုတို့လို ဖနျတီးတတျတဲ့ ကစားသမားတှကေို ရောငျးပဈလိုကျတယျ။
ပီအကျဈဂြီရဲ့ ကှာလတီ ကဆြုံးခနျးက ဘယျနရောမှာ စသလဲဆိုရငျ အဲ့ဒီမှာပါပဲ။ လုံးဝဖနျတီးမှု မရှိတဲ့ ကှငျးလယျဟာ တူဟယျလျရဲ့3Back System မှာတော့ လုပျအားနှုနျးဦးစားပေးတဲ့ ကှငျးလယျကစားသမားတှနေဲ့ အထိုကျအလြောကျအဆငျပွခေဲ့သေးသလို ဒီမာရီယာကလညျး အသကျ အရမျးမကွီးသေးဘူး။ ကာဗာနီလို တိုကျစဈကို ဦးဆောငျပေးမယျ့ ဝါရငျ့၊ နမော၊ အမျဘာပေ၊ ကှငျးလယျမှာ ရာဗြို၊ အနျကှနျကူး၊ ဒီယာဘီတို့နဲ့ အတျောလေး ဟုတျသှားလိုကျသေးတယျ။ ဒါပမေယျ့ အဲ့ဒီရာသီမှာ ခနျြပီယံလိဂျကနေ မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျကို ရှုံးပွီး ၁၆ သငျးအဆငျ့မှာပဲ တာ့တာပွတယျ။
ဒီလိုနဲ့ ပွီးခဲ့တဲ့နှဈ ၂၀၁၉-၂၀ ရာသီ ရောကျခဲ့တယျ။ ကီလျော နာဗကျဈ၊ ဆာဂြီယို ရီကို၊ ဘကျကာ၊ အကျဘျဒူ ဂယျြလို၊ ဟာရဲရား၊ ဂါနာ ဂယျယေး၊ အီကာဒီတို့ ဝငျလာတယျ။ ဖနျတီးမှုကို သတျနသေလား မှတျရတဲ့ ပီအကျဈဂြီတာဝနျရှိသူတှကေတော့ လိုဆဲလျဆိုကို အပွီးသတျရောငျး၊ ရာဗြိုကို မထိနျးနိုငျ၊ ဒီယာဘီ၊ အှနျကှနျကူးတို့လို Creative အစှမျးရှိသူတှကေိုလညျး ငှဖေျောပဈခဲ့တယျ။ အဓိကကတော့ FFP မငွိအောငျ လုပျရငျး အမျဘာပေ၊ နမောတို့ရဲ့ ပွောငျးရှကွေ့ေး ပိနသေမြှအတှကျ ပွနျဖွညျ့တာပါပဲ။ ဒါက အသငျးရဲ့ အောငျမွငျနိုငျစှမျးကို ထိခိုကျစခေဲ့တယျ။
ဒါပမေယျ့ ခနျြပီယံလိဂျမှာ ကှာတားကစလို့ ကိုဗဈကွောငျ့ တဈကြော့တညျးကစားပွီး လမျးကွောငျးခြောငျခြောငျနဲ့ ဖိုငျနယျကို တောငျမှနျးမွောကျမှနျးမသိ တကျသှားခဲ့တယျ။ ဘိုငျယနျနဲ့ အတှမှေ့ာတော့ အောကျကခညျြး ခံစဈပိတျကစားနပွေီး ကှငျးလယျကနေ ဘောလုံး ပွနျထှကျမလာ၊ အမျဘာပနေဲ့ နမောတို့ဆီ ဘောလုံးမရောကျတဲ့အခါ အရနျခုံက ကာဗာနီနဲ့ အီကာဒီကို ငုတျတုတျထားပွီး ခြူပိုမိုတငျးကို ဦးစားပေးသုံးတဲ့ တူဟယျလျတဈယောကျ ဘာမှမလုပျနိုငျဘဲ ပျေါတူဂီကနေ လှညျ့ပွနျခဲ့ရတယျ။
အပွောငျးအရှတှေ့ကေ ဒီရာသီမှာလညျး ထပျလှဲတာပါပဲ။ ပိုဆိုးတာက တိုကျစဈရော ခံစဈပါရတဲ့ နောကျခံလူတှေ ထှကျသှားတာပါ။ ပါဝါကောငျးလှနျးတဲ့ မူနီယေးက အလှတျနဲ့ လဈသှားပွီး သီယာဂို ဆေးလျဗား၊ ကာဗာနီ၊ ခြူပိုမိုတငျး၊ ဟီဆေးတို့အတှကျ တဈပွားမှ ပွနျမရခဲ့ဘူး။ ပွနျချေါတဲ့သူတှကေ အငှားနဲ့ အီကာဒီကို အပွီးသတျ၊ ဖနျတီးမှုဆိုတာ မကွားဖူးတဲ့ ရာဖငျညာကို သူ့အဈကို မချေါနိုငျလို့ ဆှဲစိ၊ ရိုးမားရဲ့ တိုကျစဈကနေ ခံစဈကို ပွောငျးကစားပွီး အသားမကသြေးတဲ့ ဖလျောရနျဇီနဲ့ မသိဘူး ဖကျြမယျဆိုတဲ့ ပျေါတိုက ဒါနီလို ပါရဲရားကို ချေါပွီး ကနျြတာက ဘာမှ သခြော အားမဖွညျ့နိုငျခဲ့တာပါ။ ဒီကွားထဲ ဖနျတီးမှုတျောတျောမြားမြားကို တာဝနျခံပေးတဲ့ ဘားနတျက ဒူးထိပွီး ခုထိ လဈနတေုနျးပါ။
ဒီလိုနဲ့ ရာသီဝကျမှာ တူဟယျလျအထုတျခံလိုကျရပွီး အသငျးကတော့ လကျရှိအခြိနျအထိ အမွဲတမျးယူနကြေ ဖားမားဈလိဂျမှာ ပှဲစဉျ ၃၅ အထိ ဂဏနျးမငွိမျသေးဘူး။ ခနျြပီယံလိဂျမှာတော့ အဖကျဖကျက ယိုငျနဲ့နတေဲ့ ဘာစီလိုနာနဲ့ ဘိုငျယနျမွူးနဈဆိုတဲ့ နာမညျတှကေို အနိုငျယူပွီး ဆီမီးအထိ တကျလာတော့ ဟုတျပွီထငျနတေုနျး မနျစီးတီးရှမှေ့ာ ခေါငျးမဖျောနိုငျခဲ့ဘူး။ ဝငျလာတဲ့ ပိုခကျြတီနိုလညျး စပါးဈလောကျတောငျ ဟနျခကျြမညီတော့တဲ့ ဒီအသငျးကို ဘာမှ မတတျနိုငျဘဲ ပကျပျဆီ အကွှေးပွနျဆပျလိုကျရတယျ။
ကှငျးလယျဆိုတာ အသကျဖွဈနတေဲ့ ဒီနခေ့တျေမှာ စတမျးဖို့ဒျဘရဈချြကို ရောကျပွီး ကှငျးလယျကောငျးကို ပိုငျသှားတဲ့ တူဟယျလျ ဘာဖွဈသှားလဲ၊ ဖိုငျနယျရောကျသှားတယျ။ ဉာဏျမရှိတဲ့ ကှငျးလယျလူတှနေဲ့ ကနျြခဲတဲ့ ပီအကျဈဂြီကတော့ နမောနဲ့ အမျဘာပတေို့ ဘာမှ မလုပျနိုငျရငျ ဒုက်ခရောကျသှားတယျ။ ဒါပါပဲ။ ပိတောကျတဈမကျြနှာသီခငျြး နားမထောငျရပမေယျ့ နှဈယောကျနှဈမကျြနှာ ပါရီသားတှကေတော့ အလှယျလိုကျပွီး ဘာမှ နားမလညျတဲ့ ကစားသမားချေါယူမှုတှနေဲ့ ဒီအတိုငျး ဆကျသှားလို့ မရဘူးဆိုတာကို ပွောပွခငျြတာပါလေ။
ZAWGYI: ပီအက်စ်ဂျီအသင်းကို သုံးသပ်တဲ့ ဆောင်းပါးရေးလိုက်တော့ A2Z Page ကို ကွန်ပလိန့်တွေ အများကြီး ရောက်လာပါတယ်။ ရှုံးမှ ဘလိမ်းတယ်၊ စဆရကလုပ်တယ်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် တစ်ခုပဲပြောရရင် ပီအက်စ်ဂျီအသင်းဟာ ကာလို အန်ဆယ်လော့တီနဲ့ လိုရွန် ဘလွန့်စ်(လော့ရင့် ဘလန့်စ်)တို့နောက်ပိုင်းမှာ အသင်းကြီးတစ်သင်းဖြစ်ခဲ့သလားဆိုတာ ကြည့်ကြရအောင်ပါ။
အန်ဆယ်လော့တီလက်ထက်က အသင်းကြီးတွေနဲ့ တွေ့ဆုံမှုတွေမှာ တိုက်စစ်ကို အရမ်းဦးစားမပေးတဲ့ နည်းပြဖြစ်လို့ ဂိုးပြတ်နိုင်ပွဲမျိုး နည်းခဲ့ပေမယ့် ပီအက်စ်ဂျီအသင်းဟာ အဆင့်မြင့်တဲ့ ကစားဟန်ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အန်ဆယ်လော့တီ ထွက်သွားခဲ့တော့ သူ့နေရာမှာ ဘလွန့်စ် ရောက်လာခဲ့ပြီး အသင်းပိုင်ရှင်တွေ ပိုကြိုက်တဲ့ တိုက်စစ်ကစားဟန်နဲ့ ကစားသမားကောင်းတွေကို စုဆောင်းခဲ့သလို တိုက်စစ်ကလည်း ပိုပြီး ကောင်းမွန်လာခဲ့တယ်။
၂၀၁၂ နွေမှာ ရောက်လာခဲ့တဲ့ အီဘရာဟီမိုဗစ်ခ်ျ၊ သီယာဂို ဆေးလ်ဗား၊ မော့တာ၊ လာဗက်ဇီ၊ ဗာရက်တီ၊ လူးကပ်စ် မော်ရာ၊ ဗန်ဒါဗီယယ်လ်တို့ဟာ အသင်းရဲ့ ကစားပုံနဲ့ အဆင့်အတန်းကို မြှင့်တင်ပေးခဲ့သလို လူခံတွေဖြစ်ကြတဲ့ ပတ်စတိုရီ၊ မာတွီဒီ၊ မက်စ်ဝဲလ်၊ ဂါမေးရိုး၊ ဆီရီဂူတို့လို ကစားသမားတွေနဲ့ ပေါင်းပြီး နည်းစနစ်ပိုင်း ကြွယ်ဝတဲ့ အသင်းကောင်းတစ်သင်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ချန်ပီယံလိဂ်ရလဒ်ကတော့ ဘာစီလိုနာကို ၁၆ သင်းအဆင့်မှာ အဝေးဂိုးနဲ့ ရှုံးပြီး ပြုတ်တာပါ။
နောက်တစ်ရာသီဖြစ်တဲ့ ၂၀၁၃-၁၄ မှာ ကာဗာနီကို ဆက်ခေါ်တယ်။ ကွင်းလယ်မှာ ကာဘိုင်း၊ နောက်တန်းမှာ မားကင်ညော့စ်နဲ့ ဒီညီ ရောက်လာတယ်။ ပြန်ရှင်းထုတ်ခဲ့တဲ့ ကစားသမားတွေက လူဟောင်း ပြင်သစ်သားတွေနဲ့ ဂါမေးရိုးတို့လောက်ပဲ။ ကွင်းလယ်မှာ လူငယ် ရာဗျို ကစားခွင့် တော်တော်ရလာတဲ့ ဒီရာသီမှာတော့ ချဲလ်ဆီးကို အိမ်ကွင်းမှာ တစ်ဂိုးပေးခဲ့ရလို့ အဝေးဂိုးနဲ့ပဲ ချန်ပီယံလိဂ်ကွာတားက ပြုတ်ခဲ့ပြန်တယ်။
လိုရွန် ဘလွန့်စ်လက်ထက်မှာ အသင်းရဲ့ ကစားပုံက ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီး တိုးတက်လာတာက ငြင်းမရဘူး။ ၂၀၁၄-၁၅ ရာသီမှာတော့ ပြည့်စုံမှုရှိနေတဲ့ လူစာရင်းကို ချဲလ်ဆီးကနေ ဒေးဗစ် လူးဝစ်ဇ်တစ်ယောက်ပဲ ထပ်ဖြည့်တယ်။ အခု စပါးစ်မှာ ကစားနေတဲ့ အော်ရီယေးကို တူးလူးစ်ကနေ အငှားနဲ့ စမ်းခေါ်တယ်။ မနှစ်က အနာပေးခဲ့တဲ့ ချဲလ်ဆီးကို အချိန်ပိုမှာ အဝေးဂိုးနဲ့နိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကွာတားမှာပဲ ဘာစီလိုနာကို မယှဉ်နိုင်ဘဲ လှည့်ပြန်ခဲ့ရပြန်တယ်။
၂၀၁၅-၁၆ မှာလည်း လူစာရင်းက အဖြည့်ချည်းပဲ၊ ကာဘိုင်းနဲ့ လာဗက်ဇီတို့လို အခန်းကဏ္ဍနည်းပြီး ခြေစွမ်းမကြိုက်သူတွေကို ထုတ်တယ်။ အခုထိ သက်တော်ရှည်နေတဲ့ ဒီမာရီယာ၊ ဂိုးသမား ထရက်ပ်၊ ကွင်းလယ်ရော ခံစစ်ပါရတဲ့ စတမ်ဘူလီ၊ မိုနာကိုမှာ ဟော့နေတဲ့ ကာဇာဝါတို့ကို အားဖြည့်တယ်။ တစ်နေရာမှာ ဒေါင်ဒေါင်မြည်နှစ်ယောက်နဲ့ စိတ်ကြိုက် အတင်အချလုပ်လို့ရတဲ့ အသင်းဖြစ်လာတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုပြောရမလဲ၊ ထူးမခြားနား စတိုရီက ကွာတားမှာပဲ မန်စီးတီးကို ရှုံးပြီး ပြုတ်ပြန်တယ်။
၂၀၁၆-၁၇ မှာတော့ အပြောင်းအလဲတွေ ကြီးခဲ့တယ်။ နည်းပြ အမ်မရီရောက်လာပြီး အရှိန်အဝါမြင့်တဲ့ အီဘရာဟီမိုဗစ်ခ်ျ ထွက်သွားတယ်၊ ဒေးဗစ် လူးဝစ်ဇ် ချဲလ်ဆီးပြန်ပြီး ဗန်ဒါဗီယယ်လ်၊ ဆီရီဂူ၊ စတမ်ဘူလီ၊ ဒီညီတို့ ထွက်သွားတယ်။ အသင်းနဲ့ အံမဝင်တဲ့ ခေါ်ယူမှုတွေ စလာတယ်။ ဆီဗီလာကနေ အမ်မရီခေါ်လာတဲ့ ခရာဟိုဗီယက်က အလုပ်မဖြစ်ဘူး၊ ရီးရဲလ်ဂျင်း ဟီဆေးကို ခံလိုက်ရတယ်၊ လိုဆဲလ်ဆို၊ ဒရက်ဆလာ၊ မူနီယေး၊ ဂွန်ဆာလို ဂေးဒက်စ်တို့ ရောက်လာတယ်။
ခရာဟိုဗီဟက်၊ ဟီဆေး၊ ဂေးဒက်စ်တို့ အံမဝင်ပေမယ့် ကာဗာနီရဲ့ ဂိုးသွင်းအား၊ ဒီမာရီယာရဲ့ ဖန်တီးမှု၊ မာတွီဒီ၊ မော့တာတို့ရဲ့ ကွင်းလယ်၊ ဟန်ချက်ညီတဲ့ ကစားပုံနဲ့ အမ်မရီတို့ အလုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒရက်ဆလာကလည်း ဒဏ်ရာများပေမယ့် ခြေစွမ်းကောင်းခဲ့ပြီး ချန်ပီယံလိဂ်ရလဒ်ကတော့ ၁၆ သင်းအဆင့်မှာ ဘာစီလိုနာကို လေးဂိုး-ဂိုးမရှိနဲ့ အိမ်ကွင်းမှာ နိုင်ပြီးမှ ဒိုင်ကူကူ ဘယ်လိုညစ်ညစ် ခြောက်ဂိုး-တစ်ဂိုးနဲ့ ရှုံးခဲ့တဲ့ Good Ebening ရဲ့ ရလဒ်က အားလုံးပြောစရာဖြစ်ခဲ့တယ်။
၂၀၁၇-၁၈ မှာတော့ ယူရီဆိုတဲ့ ဘတ်စ်ကေးသားက တစ်ရာသီ လာလည်တယ်။ ဒန်နီယယ်လ် အဲလ်စ်ဗက်က အလွတ်နဲ့ ဂျူဗီက လာတယ်။ နေမာကို ယူရို ၂၂၂ သန်း လျော်ကြေးနဲ့ ခေါ်ပြီး အမ်ဘာပေကို အငှားနဲ့ စခေါ်တယ်။ ဒီရာသီမှာ ပြောရရင်တော့ အခုလို ပုံမလာ ပီအက်စ်ဂျီဖြစ်လာဖို့ အစပျိုးခဲ့တာပဲ။ ကွင်းလယ်လူတွေ တသီကြီး ထွက်သွားတယ်။ မာတွီဒီကို ထိန်းမထားနိုင်ဘူး။ ပတ်စတိုရီနဲ့ မော့တာတို့ ခြေကျလာတယ်။ ဂေးဒက်စ်ကို ရှင်းထုတ်နိုင်ခဲ့ပေမယ့် လူးကပ်စ် မော်ရာကို ရောင်းလိုက်တာက နည်းနည်းနာတယ်။ အမ်မရီရဲ့ ခရာဟိုဗီယက် သုံးမရလို့ ဝက်စ်ဘရွန်းကို ငှားခဲ့ရတယ်။
ဒီရာသီမှာတော့ ရော်နယ်လ်ဒို ကောင်းလွန်းနေတဲ့ ချန်ပီယံ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်ကို နှစ်ကျော့လုံးရှုံးပြီး ပြိုင်ပွဲက ထွက်ရပြန်တယ်။ နေမာလား? အသင်းငယ်တွေနဲ့ဆို ခြေစွမ်းပြပေမယ့် ပွဲကြီးတွေမှာ ဘယ်ရောက်နေမှန်း မသိဘူး။ ကာဗာနီကိုပဲ အားကိုးနေရပြီး သူခြေစွမ်းမပြနိုင်ရင်၊ နာနေရင် အဆင်မပြေတဲ့ အသင်းကနေ ရာသီကုန်တော့ အမ်မရီ အထုတ်ခံလိုက်ရတယ်။
၂၀၁၈-၁၉ မှာ တူဟယ်လ်ရောက်လာတယ်။ အမ်ဘာပေကို အပြီးသတ်ဝယ်တယ်။ ဘယ်နားသုံးရမှန်းမသိတဲ့ ခယ်ရာ၊ အရွယ်လွန် ဘူဖွန်၊ ဆရာကြီးတွေကို အရန်ခုံ ပို့ပစ်တဲ့ ချိုပိုမိုတင်း၊ လီယန်ဒရို ပါရေးဒက်စ်တို့ကို ခေါ်တယ်။ အသင်းအတွက် တိုက်စစ်ခံစစ်မှာ အားကိုးရတဲ့ ဘားနတ်ကတော့ ဂွါဒီယိုလာလက်ထွက်မို့ အားကိုးလို့ရခဲ့တာပေါ့။ ပါရေးဒက်စ်ကတော့ Normal Pass ကလွဲရင် ဖြောင့်အောင် ပေးတတ်တဲ့သူ မဟုတ်ချိန်မှာ မော့တာ အနားယူပြီး ပတ်စတိုရီ၊ လိုဆဲလ်ဆိုတို့လို ဖန်တီးတတ်တဲ့ ကစားသမားတွေကို ရောင်းပစ်လိုက်တယ်။
ပီအက်စ်ဂျီရဲ့ ကွာလတီ ကျဆုံးခန်းက ဘယ်နေရာမှာ စသလဲဆိုရင် အဲ့ဒီမှာပါပဲ။ လုံးဝဖန်တီးမှု မရှိတဲ့ ကွင်းလယ်ဟာ တူဟယ်လ်ရဲ့3Back System မှာတော့ လုပ်အားနှုန်းဦးစားပေးတဲ့ ကွင်းလယ်ကစားသမားတွေနဲ့ အထိုက်အလျောက်အဆင်ပြေခဲ့သေးသလို ဒီမာရီယာကလည်း အသက် အရမ်းမကြီးသေးဘူး။ ကာဗာနီလို တိုက်စစ်ကို ဦးဆောင်ပေးမယ့် ဝါရင့်၊ နေမာ၊ အမ်ဘာပေ၊ ကွင်းလယ်မှာ ရာဗျို၊ အန်ကွန်ကူး၊ ဒီယာဘီတို့နဲ့ အတော်လေး ဟုတ်သွားလိုက်သေးတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီရာသီမှာ ချန်ပီယံလိဂ်ကနေ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကို ရှုံးပြီး ၁၆ သင်းအဆင့်မှာပဲ တာ့တာပြတယ်။
ဒီလိုနဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် ၂၀၁၉-၂၀ ရာသီ ရောက်ခဲ့တယ်။ ကီလော် နာဗက်စ်၊ ဆာဂျီယို ရီကို၊ ဘက်ကာ၊ အက်ဘ်ဒူ ဂျယ်လို၊ ဟာရဲရား၊ ဂါနာ ဂယ်ယေး၊ အီကာဒီတို့ ဝင်လာတယ်။ ဖန်တီးမှုကို သတ်နေသလား မှတ်ရတဲ့ ပီအက်စ်ဂျီတာဝန်ရှိသူတွေကတော့ လိုဆဲလ်ဆိုကို အပြီးသတ်ရောင်း၊ ရာဗျိုကို မထိန်းနိုင်၊ ဒီယာဘီ၊ အွန်ကွန်ကူးတို့လို Creative အစွမ်းရှိသူတွေကိုလည်း ငွေဖော်ပစ်ခဲ့တယ်။ အဓိကကတော့ FFP မငြိအောင် လုပ်ရင်း အမ်ဘာပေ၊ နေမာတို့ရဲ့ ပြောင်းရွှေ့ကြေး ပိနေသမျှအတွက် ပြန်ဖြည့်တာပါပဲ။ ဒါက အသင်းရဲ့ အောင်မြင်နိုင်စွမ်းကို ထိခိုက်စေခဲ့တယ်။
ဒါပေမယ့် ချန်ပီယံလိဂ်မှာ ကွာတားကစလို့ ကိုဗစ်ကြောင့် တစ်ကျော့တည်းကစားပြီး လမ်းကြောင်းချောင်ချောင်နဲ့ ဖိုင်နယ်ကို တောင်မှန်းမြောက်မှန်းမသိ တက်သွားခဲ့တယ်။ ဘိုင်ယန်နဲ့ အတွေ့မှာတော့ အောက်ကချည်း ခံစစ်ပိတ်ကစားနေပြီး ကွင်းလယ်ကနေ ဘောလုံး ပြန်ထွက်မလာ၊ အမ်ဘာပေနဲ့ နေမာတို့ဆီ ဘောလုံးမရောက်တဲ့အခါ အရန်ခုံက ကာဗာနီနဲ့ အီကာဒီကို ငုတ်တုတ်ထားပြီး ချူပိုမိုတင်းကို ဦးစားပေးသုံးတဲ့ တူဟယ်လ်တစ်ယောက် ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘဲ ပေါ်တူဂီကနေ လှည့်ပြန်ခဲ့ရတယ်။
အပြောင်းအရွှေ့တွေက ဒီရာသီမှာလည်း ထပ်လွဲတာပါပဲ။ ပိုဆိုးတာက တိုက်စစ်ရော ခံစစ်ပါရတဲ့ နောက်ခံလူတွေ ထွက်သွားတာပါ။ ပါဝါကောင်းလွန်းတဲ့ မူနီယေးက အလွတ်နဲ့ လစ်သွားပြီး သီယာဂို ဆေးလ်ဗား၊ ကာဗာနီ၊ ချူပိုမိုတင်း၊ ဟီဆေးတို့အတွက် တစ်ပြားမှ ပြန်မရခဲ့ဘူး။ ပြန်ခေါ်တဲ့သူတွေက အငှားနဲ့ အီကာဒီကို အပြီးသတ်၊ ဖန်တီးမှုဆိုတာ မကြားဖူးတဲ့ ရာဖင်ညာကို သူ့အစ်ကို မခေါ်နိုင်လို့ ဆွဲစိ၊ ရိုးမားရဲ့ တိုက်စစ်ကနေ ခံစစ်ကို ပြောင်းကစားပြီး အသားမကျသေးတဲ့ ဖလော်ရန်ဇီနဲ့ မသိဘူး ဖျက်မယ်ဆိုတဲ့ ပေါ်တိုက ဒါနီလို ပါရဲရားကို ခေါ်ပြီး ကျန်တာက ဘာမှ သေချာ အားမဖြည့်နိုင်ခဲ့တာပါ။ ဒီကြားထဲ ဖန်တီးမှုတော်တော်များများကို တာဝန်ခံပေးတဲ့ ဘားနတ်က ဒူးထိပြီး ခုထိ လစ်နေတုန်းပါ။
ဒီလိုနဲ့ ရာသီဝက်မှာ တူဟယ်လ်အထုတ်ခံလိုက်ရပြီး အသင်းကတော့ လက်ရှိအချိန်အထိ အမြဲတမ်းယူနေကျ ဖားမားစ်လိဂ်မှာ ပွဲစဉ် ၃၅ အထိ ဂဏန်းမငြိမ်သေးဘူး။ ချန်ပီယံလိဂ်မှာတော့ အဖက်ဖက်က ယိုင်နဲ့နေတဲ့ ဘာစီလိုနာနဲ့ ဘိုင်ယန်မြူးနစ်ဆိုတဲ့ နာမည်တွေကို အနိုင်ယူပြီး ဆီမီးအထိ တက်လာတော့ ဟုတ်ပြီထင်နေတုန်း မန်စီးတီးရှေ့မှာ ခေါင်းမဖော်နိုင်ခဲ့ဘူး။ ဝင်လာတဲ့ ပိုချက်တီနိုလည်း စပါးစ်လောက်တောင် ဟန်ချက်မညီတော့တဲ့ ဒီအသင်းကို ဘာမှ မတတ်နိုင်ဘဲ ပက်ပ်ဆီ အကြွေးပြန်ဆပ်လိုက်ရတယ်။
ကွင်းလယ်ဆိုတာ အသက်ဖြစ်နေတဲ့ ဒီနေ့ခေတ်မှာ စတမ်းဖို့ဒ်ဘရစ်ခ်ျကို ရောက်ပြီး ကွင်းလယ်ကောင်းကို ပိုင်သွားတဲ့ တူဟယ်လ် ဘာဖြစ်သွားလဲ၊ ဖိုင်နယ်ရောက်သွားတယ်။ ဉာဏ်မရှိတဲ့ ကွင်းလယ်လူတွေနဲ့ ကျန်ခဲတဲ့ ပီအက်စ်ဂျီကတော့ နေမာနဲ့ အမ်ဘာပေတို့ ဘာမှ မလုပ်နိုင်ရင် ဒုက္ခရောက်သွားတယ်။ ဒါပါပဲ။ ပိတောက်တစ်မျက်နှာသီချင်း နားမထောင်ရပေမယ့် နှစ်ယောက်နှစ်မျက်နှာ ပါရီသားတွေကတော့ အလွယ်လိုက်ပြီး ဘာမှ နားမလည်တဲ့ ကစားသမားခေါ်ယူမှုတွေနဲ့ ဒီအတိုင်း ဆက်သွားလို့ မရဘူးဆိုတာကို ပြောပြချင်တာပါလေ။